I-Thyme | Umlimi wasemadlelweni we-intanethi | April 2020
I-Siderats: ukuthi iyini nokuthi ungayisebenzisa kanjani
Ngokuphindaphindiwe, igama elithi "siders" lizwakala emlonyeni we-agrarians abanolwazi. Iyini isiko lomquba oluhlaza, futhi kuyini injongo yokusebenzisa kwabo? Sizoqonda kulesi sihloko. Iyini i-mans Sansats eluhlaza okwesibhakabhaka izitshalo zonyaka ezikhishwe ukutshala umhlabathi. Noma yisiphi isitshalo, kungakhathaliseki ukuthi sisuka kuphi, sidonsa umhlaba, sichitha izinto zayo eziwusizo.
Ukwakheka okuwusizo, izakhiwo kanye nesicelo se-thyme
I-Thyme yinkimbinkimbi enyakazayo ekhula ngesimo se-semi-shrub yomndeni weLabiotus. Lesi sitshalo ngokuvamile sibonakala nge-thyme. Eqinisweni, i-thyme ne-thyme yizihlobo eziseduze zohlobo olufanayo. Ngamunye wabo unezinhlobonhlobo zayo, ezinye zihlukile embala, iphunga, umehluko omncane ngesimo samaqabunga neziqu.
Uyini umehluko phakathi kwe-thyme ne-thyme, ukufana nokungafani kwezitshalo
Ngenxa yokwaziswa kwamagama, abaningi bakholelwa ukuthi okweqile ne-thyme kuyisitshalo esifanayo. Ake sizame ukutadisha ngokweqile ne-thyme ngokwehlukana bese ubona umehluko. Phela, abalimi abakwazanga ukufika embonweni ovamile isikhathi eside - i-savory ne-thyme noma i-thyme yizitshalo ezifanayo noma ezihlukile.